Ireo firenena izay mamokatra angovo be rivotra ankehitriny | Fanavaozana maintso
Manuel Ramirez | | Herin'ny rivotra, Angovo azo havaozina
La ny angovo avy amin'ny rivotra no iray amin'ireo loharanom-pahavoazana lehibe ankehitriny amin'ny faravodilanitra hafa izay tsy misy ifandraisany amin'ny fampiasana solika fôsily. Tokony ho fantatrao fotsiny fa firenena 84 farafahakeliny manerantany no mampiasa angovo rivotra hamatsiana ny tariby misy herinaratra ao aminy.
Herintaona lasa izay ny fahafahan'ny rivotra nihoatra ny 369,553 gW ary ny totalin'ny famokarana angovo dia mitombo haingana ka tonga 4 isan-jaton'ny herinaratra totalin'ny planeta. Ary raha ny 17 gW napetraka tamin'ny 2014 dia efa zava-bita, tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2015 dia nahatratra 21,7 gW izy ireo, izay mitondra antsika amin'ny fahafaha-manerantany 392 gW, miaraka amin'ny 428 gW amin'ny faran'ity taona 2015 ity.
Ny fahaiza-manao manerantany dia nitombo tamin'ny volana voalohany tamin'ny 2015 5,8 isan-jato rehefa nahatratra 5,3% tamin'ny 2015 ary 4,9% tamin'ny taona 2013 tamin'io fe-potoana io ihany. taona mahafinaritra hifikiranay amin'ny 2014.
Io fiakaran'ny fampiasana herin'ny rivotra io dia tokony indrindra amin'ny tombontsoa ara-toekarena Avy amin'ity loharanom-baovao ity, ny fitomboan'ny fifaninanana, ny tsy fahazoana antoka amin'ny famatsiana solika sy gazy eran-tany ary ny fanerena hiroso amin'ny haitao madio sy maharitra mandritra ny fotoana.
1 Ireo mpamokatra lehibe ny angovo rivotra
3 Firenena hafa izay ho zava-dehibe
4 Ny angovo azo antoka amin'ny rivotra ho avy
5 Fikarohana sy fampandrosoana teknolojia vaovao
6 2016 taona iray tena ilaina amin'ny angovo rivotra
Ireo mpamokatra lehibe ny angovo rivotra
Ny indostrian'ny rivotra dia ankehitriny tarihin'ny indostria isan-karazany tsara fahaiza-manao lehibe, kaoperativa angovo ho an'ny vondrona tontolo iainana. Fantatra fa raha te hahita fahombiazana bebe kokoa amin'ity karazana loharanom-pahefana ity dia ilaina ny karazany marobe kokoa.
Tamin'ny faran'ny volana Jona 2015, ny firenena miaraka amin'i a Shina no fahaizan'ny herin'ny rivotra lehibe indrindra napetraka eo amin'ny laharana voalohany, narahin'i Etazonia tamin'ny faharoa ary i Alemana tamin'ny fahatelo.
Shina dia manana 124 gW amin'ity taona ity ary nitombo 10 gW hatramin'ny 2014 ary amin'ny 44 gW hatramin'ny taona 2013 ny fitomboana mitohy izay manampy, amin'ny ampahany, hanamaivanana ny olan'ny fandotoana, na dia mila mampiasa vola bebe kokoa amin'ity karazana loharano ity aza izy mba hahafahana mampihena azy ireo.
Ny manaraka dia Etazonia miaraka amina 67 gW Ary tamin'ny fitomboany nanomboka ny taona 2013, tao anatin'ny roa taona monja, nitombo 8 gW ny fahafahany niaraka tamin'ny tena fijanonana, zavatra iray izay hita ihany koa any Alemana, India ary Espana, mazava ho azy, raha ampitahaina amin'ny fitomboana goavambe any Shina.
Ankoatra ny fahefana lehibe amin'ny herin'ny rivotra, ilaina izany mitanisa an'i Brazil izay naneho ny tahan'ny avo indrindra fitomboan'ny tsena rehetra misy fitomboana 14% amin'ity taona 2015 ity.
Amin'ny maha-teboka ratsy antsika dia mahita tsena eropeana maromaro isika izay efa nalemy, zavatra hitranga amin'ny Alemanina rehefa miditra ny fanovana sasany amin'ny lalàna mandritra ny roa taona, zavatra izay hampihena ny herin'ny herin'ny rivotra.
Shina manantena ny hanana 347,2 gW amin'ny 2025 miaraka amin'ny fametrahana isan-taona izay hahatratra 56,8 gW. Zavatra somary manan-danja amin'ny dikan'ity karazana angovo ity ho an'ity firenena ity.
Ary na dia i China aza amin'izao fotoana izao no mpanentana faran'ity karazana angovo ity, dia ao anatin'ny fotoana mihintsy io. Ireo tarehimarika azo ampiasaina 2025 manerantany dia hihoatra ny 962,6 gW izay midika fa i Shina dia, na dia misy aza io fihemorana io, dia iray amin'ireo mpilalao lehibe amin'ity karazana angovo eto ambonin'ny planeta ity.
Tamin'ity taona ity dia nolazaina mialoha fa tsy ho sokajiana ho toy ny mpiorina angovo matanjaka indrindra amin'ny 2015, fa mbola hitarika ity sehatra ity ihany amin'ny 2016.
Firenena hafa izay ho zava-dehibe
India, Aostralia, Japon, Korea atsimo, Filipina, Thailand, ary Taiwan hampitombo ny fahafahany 148,2 gW amin'ny 2014 ka hatramin'ny 437,8 gW miaraka amin'ny isan-jato isan-jato izay hahatratra 45,5%.
Firenena lehibe hafa ho an'ny fahombiazan'ny angovo avy amin'ny rivotra dia i Arzantina, Brezila, Chile, Kolombia ary Mexico izay hanampy 45,6 gW. Efa niresaka momba an'i Uruguay sy Costa Rica izahay ho roa amin'ireo ohatra lehibe indrindra amin'ny politika mamela ny fitomboan'ny karazana angovo madio ity, zavatra iray tena ilaina amin'ny hoavintsika.
Ny angovo azo antoka amin'ny rivotra ho avy
Io karazana angovo io dia lasa mahomby tokoa. Amin'ny faritra mitombo ny fanjifana angovo dia tsy maintsy foronina ny loharanom-baovao, ary eo no ilana andraikitra lehibe ny herin'ny rivotra.
Ao amin'ny tsena matotra izay efa misy ny fotodrafitrasa ho an'ny famokarana saribao, nokleary na gazy, mbola betsaka ny fanamby miandry noho ny fiovana lehibe tokony hitranga. Tonga eto izay tsy maintsy hifaninanana amin'ny angovo azo avy amin'ny rivotra avy amin'ny angovo efa misy. Na izany aza, ny loharanon'ny angovo avy amin'ny rivotra dia safidy manintona tokoa, ankoatry ny manome angovo tsy mamoaka gazy entona.
Misy zavatra ilainy ihany koa ary mampihena ny vidiny izy ireo. Misy antony telo lehibe. Ny iray dia ny turbin-drivotra mihantitra izy ireo, miaraka amin'ny tilikambo avo kokoa sy fananganana maivana kokoa. Ny faharoa dia ny fitomboan'ny fahombiazan'ny famatrarana sy ny rafitra manamboatra mampihena ny vidiny. Ny fahatelo ary farany, dia rehefa mihabe ny fametrahana ny rivotra, dia voatahiry ny vidiny amin'ny alàlan'ny famokarana amina ambaratonga lehibe kokoa noho ny teo aloha.
Ny antony iray lehibe hafa koa dia miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary ny fiantraikan'ny angovo madio sy mora vidy izay maharitra maharitra. Ny fanomezana an'io angovo ilaina io mba hahatonga izao tontolo izao iainantsika miasa ary miaraka amin'izay dia tsy miteraka famoahana CO2 amin'ny atmosfera no tanjon'ny orinasa lehibe toa an'i Vestas.
Fikarohana sy fampandrosoana teknolojia vaovao
Tena fampiasam-bola lehibe amin'ny teknolojia vaovao ka ny fahombiazan'ny angovo avy amin'ireto turbine sy fanavaozana samihafa ireto dia mitarika amin'ny làlana hafa ahafahan'izy ireo mandray isan-jato avo kokoa amin'ny fanjifana angovo manerantany avy amin'ny angovo rivotra.
Nahita olo-malaza manana ny toerany Bill Gates izahay mampiasa vola be izy ireo amin'ny teknolojia angovo vaovao toa ny 2.000 tapitrisa dolara nampiasainy.
Avy amin'ireo olona goavambe ara-teknolojia izay manentana antsika fa tsy maintsy manova ny fomba fahitana ny angovo panorama izay ahitantsika ny tenantsika isika. Raha naneho hevitra momba an'i Gates isika, iray hafa amin'ireo lehibe toa an'i Mark Zuckerberg koa dia manao izay vitany fasika handrisihana ireo orinasa tsy miankina maro hitady ho avy madio kokoa ho an'ny rehetra sy ny planeta maharitra.
Google dia manana tetikasa tsara hafa any Afrika izay hametrahany turbinina miisa 365 mahery eo amoron'ny Farihy Turkana any Kenya. Izay hanome 15 isan-jaton'ny fanjifana herinaratra eto amin'ity firenena ity.
El fitehirizana angovo Izy io koa dia naseho fa zava-dehibe amin'ireo fiovana ilaina rehetra ireo satria ny fitehirizana ny angovo ambiny izay azon'ny turbine rivotra an-jatony maro dia ilaina hanamafisana ny fampiasana loharano angovo toy ny angovo avy amin'ny rivotra.
Tesla sy ny batterie an-tranony dia mampiseho fomba hafa, fa aleo amin'ny fizakan-tena angovo an'ny mpampiasa, saingy amin'ny ambaratonga lehibe kokoa dia mety hamatsy ny batery ilaina mba "hamonjy" io ambim-bava io.
Manana teknolojia vaovao ihany koa izahay toa ny noforonina ireo turbine tsy misy lelany nataon'i Vortex, orinasa Espaniôla izay maneno be izao noho ny fampidirana ireo turbine rivotra izay tsy dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana, satria ankoatry ny fanafoanana ny tabataban'ireo nentim-paharazana dia tsy manova ny tontolo iainana tahaka ny fanaony izy ireo.
Ity teknolojia Vortex ity dia miasa amin'ny fomba toy izany mampiasa ny deformation novokarina ny hovitrovitra ateraky ny rivotra rehefa miditra am-peo ao anaty varingarina mitsivalana somary henjana ary miantsona amin'ny tany. Io fahasimbana io no tompon'andraikitra amin'ny famokarana herinaratra.
2016 taona iray tena ilaina amin'ny angovo rivotra
Tamin'ny Fihaonana an-tampon'ny toetrandro any Paris fifanarahana maromaro no tratra izay nametraka ny 2016 ho taona iray lehibe ka tokony hiakatra be ireo isan-jaton'ny herin'ny rivotra ireo noho ny antony fantatsika rehetra.
Teny nalaina ho an'ny toetrandro izay ametrahana ny angovo rivotra ho iray amin'ireo loharano angovo tena ilaina ho an'ny fampihenana ny etona etona amin'ny rivotra iainana izay miteraka olana sy loza voajanahary manerana an'izao tontolo izao. Fanovana tsy maintsy atao amin'ny faritra rehetra eto amin'ity tontolo ity mba hahitana vokatra lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Ireo firenena izay mamokatra angovo be indrindra amin'ny rivotra amin'izao fotoana izao
Douglas_dbsg dia hoy izy:
Ny hevitra famoronana toeram-piompiana rivotra bebe kokoa mba hanatsarana kely ny tontolo iainana dia tsara
Mamaly an'i Douglas_dbsg
lucy soda dia hoy izy:
tsara izany nanampy ahy ho an'ny sekoly ...: p
Mamaly an'i lucy sosa
ooooooooooo tsara izany
angovo volondavenona dia hoy izy:
Ary miakatra izay tsara
Mamaly an'i energiagris
dariana ramones dia hoy izy:
Izany dia nanampy ahy tamin'ny sekoliko ary nahazo A aho
Mamaly an'i dariana ramones
florence torres dia hoy izy:
Izy io koa dia nanompo ahy ho an'ny sekoliko ary naka iray toa an'i dariana ramones aho
Mamaly an'i florencia torres
Nerea dia hoy izy:
Heveriko fa tsara ny miheveran'izy ireo ny tontolo iainana.
Hevitra lehibe ny angovo avy amin'ny rivotra! ♥
Valiny tamin'i Nerea
Jose Castillo dia hoy izy:
Manana teknolojia vaovao isika amin'ny fitahirizana angovo avy amin'ireo toby mpamokatra herinaratra amin'ny herin'ny masoandro sy ny rivotra amin'ny fotoana anaovana azy ary, ahafahana mampiasa azy amin'ny fotoana fanjifana be indrindra izay tsy fotoanan'ny taranaka hatrany.
Raha liana ianao, mifandraisa aminay info@zcacas.com
Mamaly an'i jose castillo
nelson sabino jaque busts dia hoy izy:
Nandinika ity olana ity aho 30 taona lasa izay, nanana tetik'asa marobe aho nefa misy roa miavaka, ny iray manana herin-drivotra paradigma ary ny iray kosa ho an'ny onjan-dranomasina. Hatreto dia tsy hitako ny fomba hivarotana azy ireo. Hitako fa maika ny hivoaka amin'ny rafitry ny tilikambo goavambe, miaraka amina famaky, ho an'ny iray mahomby kokoa ary noho ny onja, hanolotra vahaolana ho an'ny tanjona indostrialy, izay mbola tsy nitranga hatreto. Misokatra amin'ny fifandraisana aho mba handroso amin'ity làlana manan-danja ity.
Mamaly an'i nelson sabino jaque bustos
Fanapahan-kevitra tsara 🙂
Mamaly an'i osmar
Izao tontolo izao dia manana angovo miisa 300 gigawatt an'ny masoandro photovoltaic